SHARCIGU WUU NEEFSADDAA SIDDA NOOLAHA.
Wednesday February 02, 2022 - 20:46:16 in by Super Admin
Bare Kuliyada Sharciga Jaamacad ka dhigayey ayaa intii aanuu derisgii
xiisada bilaabin ardaydii fasalka fadhiday midka mid intuu si toos ah u abaaray ku yidhi magacaa?
Ardaygiina si qumman oo anshax leh ayuu barihii ugu hal celiyey ama magaciisii ugu sheegay "magacaygu waa hebel!"
Barihiina intuu giir iska kiciyey ayuu ku celiyey "ma adiga ayaa hebel ah", ardaygiina wakaa yidhi "haa macalin..."
Barihii: intuu tin iyo cidhib cadho is geliyey ayuu ardaygii ku yidhi guro xamaamtaada (Buuggaagtada) oo fasalka iiga bax...
Ardaygii: macalin magacayga ayaad ii weydiisay waanaan kaaga jawaabay e, maxaan ku baxaa, gefka aan sameeyey se muxuu yahay?
Waa dood arday iyo barihiiye, is-difaacii ardayga laga tun-roona fasalkiina laga saar isagoo ciilan oo caddaalad daro tirsanaya.
Yabkee, ardaydii kale ee fasalka fadhiday oo ahaa kuwo qeexitaanka sharciga la la-daabshay oo wax uga baxsanyihiin midkoona kuma dhiiran inuu doodii baraha iyo ardayga uu soo dhex galo kana garnaqo, aamus bayna wada cuskadeen.
Kadib wuxuu bilaabay casharkii wuxuuna waydiiyay ardaydii: Maxaa shuruucda loo sameeyay?
Mid ka mid ah ardaydii ayaa yidhi: "Si loo xakameeyo dhaqanka dadka."
Arday kale ayaa yidhi: "Ilaa laga codsanayo. Ardaygii saddexaad ayaa yidhi: Si ay-san kuwa awooda lihi u dulmin kuwa taagta-daran.
Barihii ayaa yidhi: "waa runtiini e intaasi iguma filna."
Arday kale ayaa gacanta kor u taagay oo ku jawaabay: In lagu gaadhayo caddaalad guuleysata.
Barihii ayaa yidhi: "Haa" Waa jawaab sax ah e, in caddaaladdu u guuleysato, waa maxay danta ku jirtaa?
Arday kale ayaa ugu jawaabay: in aan cidna xuquuqdiisa loo dulmiyin oo ilaaliyo xaqiisa si ay danta guud u saxnaato.
Barihiii: ayaa yidhi: hada jawaabo cabsi la'aan ayaad bixiseen e, miyaan ku gefay ama dulmiyey ardaygii aan fasalka ka saaray?
Kulligoodna waxay yidhaahdeen: "Haa"
Barihii: ayaa intuu si dhab ah u xanaaqay ku yidhi "haddaad sidaa u garanaysaan sharciga, maxaad haddeer u aamusteen markaan ardayga dulimayayey..?!"
Maxay se, tarayaan shuruucdu haddii aynaan lahayn geesinimo aan ku dabaqno/dhaqan galino ?!
Wuxuuna u raaciyey, haddii aad aamustaan marka qof caddaalad darro la gula kaco oo aydan xaqa difaacin, waxaad lumineysaan dadnimadaada, dadnimaduna gorgortan ma geli karto, hadday luntana bulshada oo dhan ayaa lumaysa...
Intaa ka dib, barihii wuxuu wacay ardaygii uu fasalka ka saaray wuxuuna ku raali galiyey ardaydii oo dhan hortoodii, wuuxuuna ku yidhi tani waa casharkiini maanta e waa in aad dabaqdaan oo aad dhaqan gelisaan sharciga si ay caddaaladu u guuleysato.
Murti sharcigu wuu neefsadaa sida noolaha, wuu se bukoodaa e ma bakhtiyo.
《Maxaa kaaga baxay》
Sharma'arke Aare Ciid
Isha Ku Hay Shabakedda Wararka Ee Qumannews.net Goor Kasta Iyo Goob Kasta Oo Aad Joogto Ama Ku Sugan Tahay